Abantu abayi-10 abaDumileyo abakhulise ukuzithemba kwabo
Ngu S. Renee Smith, Vivian Harte
i-wellbutrin kunye ne-adderall kunye
Bonke abantu abadumileyo abangaphantsi banokuthi bavumele ukuba bazive bengaxabisekanga ukubagcina bephantsi. Endaweni yokuba bakhethe ukoyisa ubunzima obukhulu, izehlo ezimbi kunye neemvakalelo ababenazo. Bazoyisile iingxaki zabo, nawe unako.
UHelen Keller (1880-1968) wayenokubona kakuhle kunye nokuva de wayeneminyaka eli-1-1 / 2 ubudala. Wafumana ukugula ekukholelwa ukuba ibingumbala obomvu okanye imeningitis. Emva koko, akazange abone okanye eve.
Utitshala wakhe, u-Anne Sullivan, wafika xa wayeneminyaka emi-6 ubudala. Ngeminyaka esi-7 ubudala, waya kwiziko i-Perkins Institute for the Blind. Emva kwexesha, yena notitshala wakhe bafudukela eNew York ukuze afunde kwisikolo sabangevayo. Xa wayeneminyaka eyi-14, wangena kwiCambridge School for Young Ladies, kwaye xa wayeneminyaka engama-20, waqala kwiKholeji yaseRadcliffe. Waphumelela eRadcliffe, cum laude, eneminyaka engama-24 njengoyena mntu wokuqala osisithulu nongaboniyo ukufumana isidanga se-bachelor.
Waba sisithethi esidumileyo, ekhankasela uxolo lwehlabathi, amalungelo oluntu, amalungelo abasebenzi, amalungelo abasetyhini, kunye nolawulo lokuzalwa. Ukongeza, wayengumbhali weencwadi ezininzi kunye nezincoko kwezi zihloko. Ngo-1964 wanikwa imbasa kaMongameli weNkululeko nguMongameli uLyndon B. Johnson. Kwaye kunyaka olandelayo, wanyulwa kwi-National Women's Hall of Fame kwiNew York World's Fair. Ngo-1971, wangeniswa kwi-Alabama Women's Hall of Fame.
UThomas Edison (1847-1931) waya esikolweni iinyanga ezintathu kuphela. Utitshala wakhe wayecinga ukuba ukhubazekile ngokwengqondo kuba wayengakwazi ukudibana nendlela ingqondo kaEdison esebenza ngayo. Ukongeza, impilo kaEdison yayintekenteke njengomntwana.
Ngenxa yokuba umama ka-Edison wayengumfundisi-ntsapho, wamfundisa ekhaya. Njengomntu oselula, kwenzeka into echaphazela uEdison ubomi bakhe bonke. Waphakanyiswa ziindlebe zakhe kuloliwe ohambayo, kwaye waqala waba sisithulu.
U-Edison unelungelo lobunikazi lokuvelisa okokuqala, umatshini wokurekhoda iivoti zombane, eneminyaka engama-21. Injongo kaThomas yayikukuvelisa into entsha rhoqo kwiintsuku ezilishumi, kwaye kwisithuba seminyaka emine, walinganisa ipatent entsha rhoqo kwiintsuku ezintlanu. Ilebhu yakhe yayininzi kangangokuba wabizwa ngokuba yiWizard yaseMenlo Park.
Ilabhoratri kaEdison yaqulunqa izinto ezinjengegramafoni, umfanekiso oshukumayo, kunye nebhalbhu yesibane se-incandescent. Ekugqibeleni, ishishini lakhe lombane laye labizwa ngokuba yiGeneral Electric Company. Thetha ngombono oqaqambileyo!
UHaretet Tubman (malunga nowe-1822-1913) wayengowesihlanu kubantwana abasithoba abazalwa likhoboka. UTubman kunye nabantakwabo babini babaleka ebukhobokeni xa wayeneminyaka engama-27. Abantakwabo babuya bamnyanzela ukuba abuye nabo. Kungekudala emva koko, waphinda wabaleka waya ePhiladelphia, ePennsylvania, ngaphandle kwabantakwabo, esebenzisa i-Underground Railroad, inkqubo engacwangciswanga, ehlelwe kakuhle yabamnyama abakhululekileyo, amakhoboka kunye nabamhlophe abolitioners.
Kuyo yonke iMfazwe yamakhaya, uTubman wasebenzela i-Union Army, okokuqala njengompheki kunye nomongikazi kwaye kamva njenge-scout exhobileyo kunye ne-spy. Wayengumfazi wokuqala ukukhokela uhambo lokulwa emfazweni, ekhulula amakhoboka angaphezu kwe-750 eSouth Carolina kwii-steamboats ezintathu.
Kwiminyaka yakhe kamva, uTubman waya eNew York, eBoston, naseWashington, D.C., ukukhuthaza ilungelo labasetyhini lokuvota. Wayezimasa iintlanganiso zemibutho eyaneleyo kwaye wasebenza kunye noSusan B. Anthony. Kwintlanganiso yokusekwa kweNational Federation of Afro-American Women, uTubman wayesisithethi esiphambili.
UTheodore Roosevelt (1858-1919) wazalelwa kusapho olutyebileyo lwaseNew York, kodwa wayengumntwana ogulayo. Wayenesifo sombefu esinamandla esasimenza buthathaka. Ukongeza, wayenovalo kwaye eneentloni. Ngenkuthazo kayise, waqala ukuzilolonga, kwaye ekugqibeleni, utata wakhe wamqeshela umqeqeshi wamanqindi. Ukongeza, wafunda ngamadoda akhaliphileyo, kwaye wayenomnqweno onzulu wokufana nawo.
Wayefundiswe kakhulu ekhaya ngabazali bakhe kunye nabahlohli kwaye wangena kwiYunivesithi yaseHarvard eneminyaka eyi-16. Ukugqiba kwakhe ikholeji, ugqirha wamnika uvavanyo lomzimba kwaye wamfumanisa eneengxaki zentliziyo. Ugqirha ucebise ukuba aphephe ukunyanzelisa umzimba, iingcebiso zikaRoosevelt zingahoywa kwangoko.
Ngo-1886, uRoosevelt wayengumgqatswa weRiphabhlikhi kasodolophu weSixeko saseNew York, kodwa waphulukana nomdyarho weendlela ezintathu. Ngo-1897, uRoosevelt wamiselwa njengoNobhala oNcedisayo woMkhosi woMkhosi nguMongameli uWilliam McKinley. Xa iSpain neCuba babhengeza imfazwe, warhoxa kuMkhosi wamanzi waseka iQela lamaVolontiya laseMelika lokuqala (iRough Rider), ethatha inxaxheba emfazweni.
Emva koko waba yiRhuluneli yaseNew York ngo-1898, kwaye wayenguSekela Mongameli xa uMongameli uMcKinley wabulawa ngo-1900. URoosevelt waba ngoyena mntu mncinci ukuba nguMongameli, kwaye waphumelela ngo-1904.
UAlbert Einstein (1879-1955) wayejongwa njengomfundi ocothayo kwaye wayenokuba nesifo sokuqaqanjelwa sisisu. Wayenentloni kwaye ethule. Waqala ukuthetha eneminyaka emi-2, kwaye waqhelisela into afuna ukuyithetha. Ngelixa sinokubona ukuba njengamalungiselelo amahle kakhulu namhlanje, uninzi olujikeleze u-Einstein lubone ukuziqhelanisa nalo njengophawu lobuyatha.
Kwiminyaka eyi-9, waya kwisikolo samabanga aphakamileyo, apho achitha kuphela iiyure ezi-3-4 ngeveki kwizifundo zakhe azithandayo: izibalo kunye nesayensi. Kwakusekhaya kuphela apho u-Einstein wayenokufunda into ayifunayo. Ekugqibeleni wacelwa ukuba ashiye isikolo esiphakamileyo okanye ashiye isikolo.
Wafaka isicelo kwiZurich Polytechnic eSwitzerland, kwaye ngelixa wayepasa icandelo lezenzululwazi kunye nezibalo, wasilela kwicandelo ngokubanzi. Endaweni yoko waya eCantonal School, apho wachuma khona kuba wayethathe inxaxheba kwimisebenzi yezandla nakwingcinga yomqondo. Waphinda wafaka isicelo kwiZurich Polytechnic kwaye wamkelwa.
Umsebenzi wakhe wokuqala wayekwiofisi yelungelo lomenzi yaseSwitzerland, egweba ukufaneleka kwezicelo zamalungelo awodwa omenzi wechiza ezazifuna i-physics iqonde. Ekugqibeleni wafumana i-Ph.D. Emva kokufunda ukuba wayejoliswe ngamaNazi eJamani, wathuthela eUnited States eneminyaka engama-33 kwaye wabamba isikhundla se-Institute for Advanced Study kwiYunivesithi yasePrinceton.
Waphuhlisa ithiyori ngokubanzi yobudlelwane kwi-physics kwaye wenza ifomula NGU = mc ² Ukuchaza ubudlelwane phakathi kobunzima namandla. Ufumene ibhaso likaNobel kwiFizikiki ngo-1921 ngokufumanisa umthetho wefotoelectric.
Mahatma Gandhi (1869–1948) wazalwa kwaye wakhulela kwindawo yomrhwebi ongumHindu eIndiya. Ngexesha lokuzalwa kwakhe, i-India yayilawulwa yiNgilane. Wayeyinkwenkwana eneentloni kwaye eboyika ubumnyama.
Ukhuthaze abantu abacinezelweyo ukuba baphucule iimeko zabo kwaye wakhokela uqhankqalazo olunoxolo noqhankqalazo. Wabanjwa izihlandlo ezithandathu eMzantsi Afrika kwaza kwabanjwa izihlandlo ezithandathu e-Indiya, wachitha ixesha elininzi entolongweni phakathi konyaka we-1908 nowe-1942.
UGandhi wakhokela intshukumo yokuqhawula eNgilane. Wapapasha iSibhengezo sokuZimela kweIndiya, esenza imeko kuburhulumente baseIndiya. Ngokubanzi ngenxa yemizamo kaGandhi, i-India yafumana inkululeko kwiNgilane ngo-1947. Amazwe amabini ayilwa ngokuchasene neengcebiso zikaGandhi, elinye lamaHindu kunye nelinye lamaSilamsi. UGandhi wasweleka ngoJanuwari 1948 xa umntu wamaHindu wamdubula ngenxa yokuba enovelwano kakhulu kumaSilamsi.
URalph Waldo Emerson (1803-1882) wazalelwa eMassachusetts. Uyise wasweleka kanye phambi komhla wesibhozo wokuzalwa kukaEmerson. Ukhuliswe ngumama wakhe kunye nabanye abantu basetyhini kusapho.
Ngeminyaka eyi-14, u-Emerson waya kwiKholeji yaseHarvard, kodwa wayengengomfundi olungileyo kwaye waphumelela phakathi kwiklasi yakhe enabantu abangama-59. Wayenempilo enkenenkene, ke waqala wafudukela eSouth Carolina emva koko waya eFlorida ukuphinda abuyele empilweni. Wathatha uhambo olude elunxwemeni kwaye wabhala imibongo.
Lilonke, wanikela ngaphezulu kwe-1,500 intetho yoluntu kwaye wabhala uninzi lwezincoko malunga nokuzimela, inkululeko, kunye nokukwazi kwabantu ukuphumeza nantoni na.
Meloxicam, yenzelwe ntoni?
UAbraham Lincoln (Ngo-1809-1865) wazalelwa kwi-log cabin kwiilali zaseKentucky. Intsapho yakhe yanyanzelwa ukuba iphume ekhaya, kwaye kwafuneka asebenze eneminyaka esi-7 ukunceda ukuxhasa usapho. Unina wamfundisa ukufunda nokubhala, kodwa wasweleka xa uLincoln wayeneminyaka eli-9 kuphela ubudala.
Xa uLincoln wayeneminyaka engama-45, wagijima waya kwi-Senate yase-US waza walahleka. Kwiminyaka emibini kamva, wafuna ukutyunjwa kuka-Sekela Mongameli kwaye wafumana iivoti ezingaphantsi kwe-100. Kwiminyaka emibini kamva, wabaleka waya kwi-Senate kwakhona kwaye waphulukana kwakhona.
Wayechasene nobukhoboka kwanokuba amazwe amatsha aseNtshona abe ngamakhoboka. Uncede ukudala iPublic Republic Party.
Ngo-1860, uLincoln wagijimela uMongameli waza waphumelela. Emva kokunyulwa kwakhe, uMzantsi wahlukana kwi-Union kunye neMfazwe yombutho yaqala. Wayigcina i-Union ngexesha leMfazwe yamakhaya, waphelisa ubukhoboka, womeleza urhulumente. Uncede ukomeleza uqoqosho lwaseMelika ngokuphucula iibhanki kunye nokufaka amaxabiso okhuselo ukukhuthaza ukwakhiwa kweefektri kunye noololiwe.
UFrederick Douglass (1818-1895) wazalwa elikhoboka eMaryland. Uhlukaniswe nomama wakhe eneminyaka eyi-7 emva koko waya kuhlala nomakhulu wakhe.
Wafunda ukufunda xa wayeneminyaka eli-12. Wayekholelwa ukuba ulwazi alufumeneyo ngokufunda lwaluza kumnceda ukuba asuke ebukhobokeni aye enkululekweni. UDouglass wazama ukubaleka kabini ngaphambi kokuba aphumelele. Waqala ukuya kwiintlanganiso zokupheliswa, kwaye kwelinye icala, wamenyelwa ukuba athethe. Wayenovalo, kodwa wazinyanzela ukuba athethe. Wayeliciko kangangokuba wayekhuthazwa ukuba abe ngumfundisi-ntsapho ochasene nobukhoboka.
Eyokuqala kwezintathu ngobomi bakhe zapapashwa ngo-1845. Emva kokubuyela e-United States, wapapasha iphepha-ndaba lokuqala. UDouglass wafundisa ngokuchasene nobukhoboka kunye nokuthanda ubandlululo ngexesha leMfazwe yamakhaya. Emva koko, wathetha ngelungelo labasetyhini lokuvota.
UEleanor Roosevelt (1884-1962) wayengumtshana kaTheodore Roosevelt. Umama wakhe wayenentlalontle entle, ngelixa u-Eleanor wayengenanto. Watshata noFranklin D. Roosevelt xa wayeneminyaka engama-21.
Xa uFranklin wabethwa sisifo sepoliyo, kwaye imilenze yakhe ikhubazeke unomphelo, unkosikazi wakhe wathi makahlale kwezopolitiko. Wanyulwa njengoMongameli ngo-1932, kwaye u-Eleanor wabamba iinkomfa zeendaba, wajikeleza ilizwe, wabhala iikholamu zamaphephandaba, kwaye wavela kwirediyo. Uthethele amalungelo abambalwa, amahlwempu, ulutsha kunye nabantu abangasebenziyo.
Ngo-1945, u-Eleanor wabizwa ngokuba yi-US Delegate kwiZizwe eziManyeneyo. Wayengusihlalo wekomiti eyabhala i-Universal Declaration of Human Rights ngo-1948. Kwaye ngo-1961, wonyulwa nguMongameli uJohn F. Kennedy njengoSihlalo weKhomishini kwiNqanaba labafazi.
Ithetha ntoni p kwizibalo
ujonga njani ikhowudi yemvelaphi
isetyenziselwa ntoni escitaloprám
ihydroxyzine hcl 50 mg